‘थलाइवी’को ट्रेलर सार्वजनिक कार्यक्रममा किन यसरी रोइन् कंगना रनवत ? – ramechhapkhabar.com
‘थलाइवी’को ट्रेलर सार्वजनिक कार्यक्रममा किन यसरी रोइन् कंगना रनवत ?
बलिउड अभिनेत्री कंगना रनवत जन्म दिनको अवसर पारेर फिल्म ‘थलाइवी’को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ। मंगलबार चेन्नइमा एक कार्यक्रमका बीच फिल्मको ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको हो। फिल्मको ट्रेलर सार्वजनिक भएको केही बेरमै सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा छाएको छ।
ट्रेलर सार्वजनिक कार्यक्रममा अभिनेत्री कंगना डाको छोडेर रोएकी थिइन्। कंगनाले आफू रोएको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेपछि उक्त भिडिओ अहिले भाइरल हुन पुगेको छ।
सामाजिक सञजाल ट्विटरमा उक्त भिडिओ सेयर गर्दै कंगनले लेखेकी छन्, ‘म आफूलाई बब्बर शेरनी भन्छु, किनभने म कहिल्यै रुँदिन र कसैलाई रुवाउने मौका पनि दिँदिँन्। म पछिल्लो पटक कहिले रोएकी थिएँ भन्ने मलाई याद पनि छैन्। तर आज धेरै नै रोएँ, मलाई एकदमै आनन्द महसुस भइरहेको छ।’
उनी चलचित्रका निर्देशक विजयको तारिफ गर्ने क्रममा भावुक हुँदै रोएकी हुन्।
पाइप लाइनमा सौगात मल्लका आधा दर्जन फिल्म
काठमाडौं– नयाँ नेपाली फिल्म ‘दि सेक्रेट्स अफ राधा’ को छायाङ्कन पूरा भएको छ । अभिनेता सौगात मल्ल निर्माता समेत रहेको यो फिल्मको छायाङ्कन सम्पन्न भए लगत्तै उनी नयाँ फिल्ममा व्यस्त हुने देखिएका छन् । यसैका लागि उनी आज भारतको सिक्किम पुगेका छन् । बुधवारदेखि छायाङ्कन सुरु हुन लागेको चलचित्र ‘जार’ मा समेत उनको मुख्य भूमिका रहने छ ।
यो फिल्म दशैं–तिहारको समय पारेर प्रदर्शन गर्ने निर्माण टिमको तयारी रहेको छ । सौगात अभिनित फिल्म ‘लप्पन छप्पन–२’ यही चैत २७ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउँदैछ । उक्त फिल्मसँगै सोही मितिमा अन्य दुई नेपाली फिल्म कृष्ण लीला तथा मन सँग मन पनि प्रदर्शनमा आउँदै छन् ।सौगात अभिनित फिल्म ‘माइकल अधिकारी’ को प्रदर्शन मिति अघिल्लो वर्षको चैत २८ लाई घोषणा गरिएको थियो ।
कोरोनाका कारण उक्त फिल्म प्रदर्शन हुन सकेन । उक्त फिल्म प्रदर्शनको समय टुङ्गो लगाउन नसकेर निर्माण टिम राम्रो मितिको प्रतीक्षामा छन् ।
अर्पण थापा निर्देशित फिल्म ‘तीन जन्तु’ मा समेत सौगातको मुख्य अभिनय छ । फिल्मको टिजर सार्वजनिक भएको छ भने प्रदर्शन मिति तय भएको छैन ।
कोरोनाले नेपािली फिल्म क्षेत्र थलिएको छ, तर सौगातको व्यस्तता भने बढ्दो छ । उनका प्रदर्शित फिल्महरु पोइ पर्‍यो काले, लूट-२, माछा माछा लगायतले सफलताको स्वाद चाख्न पाएनन् । पछिल्लो समय प्रेमिका सृष्टि श्रेष्ठलाई उनी अभिनीत चलचित्र लिनै पर्ने भन्ने आरोप सौगातलाई लाग्ने गरेको छ ।
फिल्मको गुणस्तर घट्दो छ भने सङ्ख्या बढ्दो । यसरी हेर्दा अघिल्लो वर्ष सौगातका ५ भन्दा बढी फिल्महरु प्रदर्शनमा आउने छन् । संख बढाउँदै गर्दा सौगातले फिल्को छनौटमा पनि ध्यान दिने समय आएको देखिन्छ ।